​पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघको नयाँ नेतृत्व चयन, अध्यक्षमा विनोद शर्मा
पोखरा । पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घको १४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा सातौँ अधिवशेनले विनोद शर्मा न्यौपानेको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। सङ्घको १३ सदस्यीय कार्यसमितिको प्रथम उपाध्यक्षमा बलभद्र नकर्मी,..
जगदम्बा सिमेन्टले घर बनाउदाँ १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको घर बीमा हुने
काठमाडौं । जगदम्बा सिमेन्टले आफ्ना ग्राहकको घरको बीमा गरिदिने भएको छ । यसका लागि कम्पनीले ‘जगदम्बा सिमेन्ट होम इन्स्योरेन्स’ योजना ल्याएको छ । योजना अन्तर्गत जगदम्बा सिमेन्टको कुनैपनि उत्पादनको खरिदमा १..
आयल निगमले चैत्र महिना मै सरकारको ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्‍यो
काठमाडौ । नेपाल आयल निगमले सरकारसँग लिएको दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेको छ। अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ घट्दा पनि मूल्य नघटाएको निगमले पछिल्लो पटक धमाधम ऋण तिरेको हो। संसदको वाणिज्य तथा..
​सरकारले हाल्यो ११ खाद्य उद्योग विरुद्ध मुद्दा, बजार अनुगमनका क्रममा मसला, बिस्कुट, तेलका उत्पादन मापदण्डविपरित
पथरी (मोरङ) । पूर्वाञ्चलका ११ उद्योगका उत्पादनविरुद्ध क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले मुद्दा चलाएको छ । गत मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको चार महिनाको अवधिमा बजार अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत खाद्य..
​सरकारी संयन्त्र निकम्मा भएपछि बजारमा ग्याँस अभाव
काठमाडौं । वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यास सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन्। भारतीय आयल कर्पोरेसनले हाल दैनिक १८ मेट्रिक टन ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर वितरण..
​हस्तकलाको निर्यात घट्यो
अच्युत रेग्मी काठमाडौँ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण नेपाली हस्तकलाको निर्यात घटेको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा पाँच अर्ब तीन करोड ५९ लाख रुपैयाँको सामान विदेश निर्यात..
​किन घट्दै छ सुन तथा गहनाको कारोबार ?
काठमाडौं । बजारमा सर्वसाधारण उपभोक्ताको मागको तुलनामा सुनको आपूर्ति तीन गुणाले वृद्धि भएपछि सुन तथा गरगहनाको कारोबार प्रभावित भएको छ । गत फागुनदेखि सुनको मूल्यमा वृद्धि हुने क्रम सुरु भएपछि बजारमा..
​‘चीनसँगको इन्धन सम्झौता कसैले रोक्न सक्दैन’
काठमाडौं । आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले चीनसँग इन्धन सम्झौता गर्न कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । ‘चीनसँग इन्धन सम्झौता हुन्छ । इन्धन आपूर्ति गर्ने विषयमा एमओयू भइसकेको छ । दुई..
जाजरकोट । यहाँका बजारमा म्याद गुज्रिएका सामग्री बेरोकटोक बिक्री–वितरण हुने गरेका छन् । अनुगमन र नियमन प्रभावकारी नहुँदा यस्तो भएको सरोकारवाला बताउँछन् । जिल्लाको सदरमुकाम, दल्ली, कालीमटी, रिम्ना लगायतका एकदर्जनभन्दा बढी..
राष्ट्रपतिद्वारा पाँचौं नेपाल अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार मेला–२०७२को उद्घाटन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घको आयोजनामा राजधानीको भृकुटीमण्डपमा विहीबारदेखि शुरु भएको पाँचौ नेपाल अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार मेला २०७२ को राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी छिन् । मेलाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले..
​बार्षिक १० अर्बको बिस्कुटको माग हुँदा स्वदेशी उद्योगको आधामात्रै उत्पादन
काठमाडौं । नेपालमा बार्षिक १० अर्बको बिस्कुटको माग भएपनि स्वदेशी उद्योगले मागको आधामात्रै उत्पादन गरेका छन् । दक्षिण एसियामै नेपालको उत्पादन महँगो हुनु, आवश्यक विद्युत् उपलब्ध नहुनु, कच्चा पदार्थ मूल्य बढ्नु..
​सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण : उपाध्यक्ष डा खतिवडा
पथरी । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले सहकारीले निजी क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभएको छ । जिल्ला सहकारी सङ्घ मोरङले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफल..
वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरलाई मान्यता दिलाउन सक्दो पहल गर्छु- उद्योग राज्यमन्त्री
वीरगन्ज । उद्योग राज्यमन्त्री मेघराज निषाद नेपालीले वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरलाई विधिवत् रुपमा औद्योगिक कोरिडोरका रुपमा मान्यता दिलाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने बताएका छन्। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आफ्नो सम्मानमा आज यहाँ..
​नुवाकोटमा ग्यास भन्डारण गर्ने सरकारको योजना : प्रधानमन्त्री
नुवाकोट । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैपक्ष अब देशको आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । नेकपा एमाले नुवाकोटको छैटौं जिल्ला अधिवेशनको शुक्रबार बट्टारमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ संविधान समावेशी र..
काँकडभिट्टा । इलाका प्रहरी कार्यालय बुधबारेले रु ११ लाख मूल्य बराबरको कपडा नक्कली भ्याट बिल बनाइ इलामको पशुपतिनगरबाट झापा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा ग १ ज ४९८२ नंको भाडाको पिकअप भ्यानलाई..
भारतले नेपालको आवश्यकतानुसार पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्न निर्देशन
काठमाडौ । भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले आफ्ना मन्त्रालयका उच्चाधिकारीलाई नेपालको आवश्यकतानुसारको पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातका लागि आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छन । यसअघि भारतका लागि नेपाली राजदूत..
लेमन 'फ्लेम अवार्ड एशिया २०१६' को अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ । लेमन प्रा.लि.ले यस वर्षको फ्लेम अवार्ड एशिया २०१६ को अन्तिम चरणमा प्रवेश पाएको छ । कम्पनीको एकीकृत बजार प्रवद्र्धन अभियान 'डाबरको रियल स्कूल अफ नेपाल २०१५' अन्तिम चरणमा..
​अधिकांश पसल अवैध, विना दर्ता र मूल्यसूचिको व्यापार
बेसीसहर । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पछिल्लो पटक बजार अनुगमनको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। व्यापारीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको भन्दै अखाद्य वस्तू बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन गर्नुपरेको प्रशासनले जनाएको छ।..
​एकै दिन हजारले घट्यो सुन, चाँदी पनि सस्तियो
काठमाडौं । सुनको भाउ आज बुधबार एकैदिन एक हजार रुपैयाँले घटेको छ । केही दिनयता उकालो लागेको सुनको भाउ आज एक हजार रुपैयाँले घटेर तोलामा ५५ हजार ५ सय रुपैयाँमा..
​भारतको बरौनीबाट ग्यास आयात प्रभावित
मोरङ । भारतको बरौनीस्थित ग्यास उद्योगमा प्राविधिक समस्या आई बन्द भएपछि नेपालतर्फको ग्यास आयात प्रभावित बनेको छ। भारतको बरौनीस्थित ग्यास उद्योगले नेपाल आयल निगमबाट प्राप्त कोटाअनुसार ग्यास उपलब्ध गराउन नसक्ने..
​बढ्यो ग्यास आयात, ४ दिनमा भित्रियो ७९ बुलेट
पर्सा । वीरगन्ज नाका सहज भएसँगै भारतबाट खाना पकाउने ग्यासको आयातमा समान्य वृद्धि भएको छ। भारतको बरौनी, हदलिया र मथुराबाट वीरगन्ज नाका हुँदै नेपालका लागि आयात हुने खाना पकाउने ग्यासको सङ्ख्या..
​सरकारले अमेरिकी बजारमा निर्यात बढाउन रणनीति तयार गरिने
काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी बजारमा तयारी पोसाकको निर्यात बढाई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने गरी निर्यात रणनीति तयार गर्ने भएको छ। वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने भन्सार छुट र व्यापार क्षमता..
​विर्तामोडमा २५ करोड लगानीमा खुल्यो 'चम्लागाई कम्प्लेक्स'
झापा । झापाको बिर्तामोडमा २५ करोड रुपैयाँको लागतमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न व्यवसायिक भवन ‘चम्लागाई कम्प्लेक्स’ सञ्चालनमा आएको छ। आइतबारबाट सुरु भएको सात तले चम्लागाई कम्प्लेक्समा लिफ्ट र अग्नि नियन्त्रण प्रणाली..
​टेलिकमका ७९६ कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश, ६ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी टेलिकमबाट पहिलो चरणमा ७९६ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका छन् । प्रायः सबै तहका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेपछि कम्पनीलाई ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आर्थिक भार पर्ने..
​९० करोड बोनस खाएरै छाड्ने आयल निगमका कर्मचारीको तयारी
काठमाडौं । उपभोक्तावाट चर्को मूल्य असुलिरहँदा पनि घाटामा गुज्रिरहेको नेपाल आयल निगमका कर्मचारी सरकारको निर्देशनविपरीत बोनस खाएरै छाड्ने तयारीमा जुटेका छन्। निगम कर्मचारीले सरकारविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण..
​ओबामाद्वारा नेपाललाई ब्यापारमा विशेष ग्राहयता दिने विधेयकमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बुधबार नेपाली उत्पादनलाई अमेरिकामा निर्यात गर्दा लाग्ने भन्सार छुटसम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अब नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने ६६ प्रकारका सामाग्रीमा भन्सार छुट हुने छ।..
हाइवेका सबै होटलमा अब एकै मूल्यमा खाना (मूल्यसहित)
काठमाडौं । धादिङ जिल्लाभरका होटलमा अब उपभोक्ताले समान मूल्यमा खाना र खाजा खान पाउने भएका छन्। धादिङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीका अनुसार जिल्लाका सबै होटलले बिक्री वितरण गर्ने खाद्यसामग्रीको मूल्य..
​इन्धनमा भारतको नाकाबन्दी कायमैः समस्या सुल्झाउन प्रबन्ध निर्देशक खड्का भारत गए
काठमाडौँ । भारतीय आयल नियम(आइओसी)ले मागअनुसारको पेट्रोलियम पदार्थको ‘लोडिङ्’ नदिँदा विगत पाँच महिनादेखि इन्धन सङ्कलन समाधान हुन सकेको छैन । नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि आइओसीले इन्धन दिन..
​नेशनल हाइड्रोले किन बोलायो विशेष साधारणसभा
काठमाडौं । आधिकारिक सञ्चालक समिति को हो भन्ने बिषयमा विवाद रहेको नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले विशेष साधारणसभा डाकेको छ । कम्पनीले फागुन २८ गते साधारणसभा डाकेको हो । साधारणसभाले २०६९..
​क्षमताभन्दा बढी सामान बोक्ने सत्ताइस सय ट्रकलाई कारबाही
चितवन । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले क्षमताभन्दा बढी सामान बोक्ने दुई हजार ७०३ वटा मालबाहक ट्रकलाई कारबाही गरेको छ । गत तीन महिनामा ती सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको हो ।..
Results 889: You are at page 15 of 30